ကလေးအရွယ်တွင်ခံစားရသော အဆုတ်ကင်ဆာကို ကုသပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » အဆုတ်ကင်ဆာ » ကလေးအရွယ်တွင်ခံစားရသော အဆုတ်ကင်ဆာကို ကုသပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များ
ကလေးအရွယ်တွင်ခံစားရသော အဆုတ်ကင်ဆာကို ကုသပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များ
ကလေးအရွယ်တွင်ခံစားရသော အချို့သော အဆုတ်ကင်ဆာများသည် ကုသပြီးနောက်ပိုင်း အောက်ပါအကျိုးဆက်များခံစားရနိုင်ပါသည်။
· ဟော့ခ်ျကင်း အကြိတ်ကင်ဆာ
· ပင်မဆဲလ်ကိုအစားထိုးကုသရသော ကင်ဆာ
အချို့သောကင်ဆာဆေး(ဓာတုဗေဒဆေး)များနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းတို့သည် ကင်ဆာကုပြီးနောက် သက်ရောက်မှုများကို ပိုဖြစ်စေပါသည်။
· အဆုတ်တွင် ကင်ဆာဖြစ်နေသောအစိတ်အပိုင်း နှင့် ရင်ဘတ်ကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း
· Bleomycin, Busulfan, Carmustine, Lomustine စသည့်ကင်ဆာဆေး (ဓာတုဗေဒဆေး)ဖြင့်ကုသခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်းတို့သည် အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေသည်။
· ရင်ဘတ်ကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်းသည် ဓာတ်ေ၇ာင်ခြည်ပမာဏအနည်းအများ၊ ဓာတ်ေ၇ာင်ခြည်ပေးသော အစိတ်အပိုင်းနှင့် ဓာတ်ေ၇ာင်ခြည်လက်ခံရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးအဆုတ်ကို ထိခိုက်မှု အနည်းအများကွာခြားပါသည်။
· ပင်မဆဲလ်ကိုအစားထိုးမကုသမီ တကိုယ်လုံးကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း။
အဆုတ်ကင်ဆာကုထုံး၏ နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြသနာများသည် ခွဲစိတ်ခြင်း၊ စသည့်ကင်ဆာဆေး (ဓာတုဗေဒဆေး)ဖြင့်ကုသခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်းတို့တွဲ၍ကုသရသော ကလေးများတွင် ပိုဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါရောဂါများရှိလျှင်လည်း ဆေးဒဏ်ကို ပိုခံရနိုင်ပါသည်။
· ပင်မဆဲလ် အစားထိုးပြီးနောက် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း
· ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ ရှိသူများ
· ဆေးလိပ်နှင့် အခြားသောမူးကစ်ဆေးသုံးသူများ
အဆုတ်ကင်ဆာသည်များသည်ဆေးဒဏ်ကြောင့် အချို့သော ကျန်းမာရေးပြသနာများခံစားရနိုင်ပါသည်။
အဆုတ်တွင်ခံစားရသော ဆေးဒဏ်ကြောင့် အချို့သော ကျန်းမာရေးပြသနာများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
· ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကြောင့် အဆုတ်ရောင်ခြင်း
· အဆုတ်တွင် အမာရွတ်များဖြစ်ခြင်းကြောင့် အဆုတ်သိပ်သည်းဆများလာခြင်း
· နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ၊ နမိုးနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ ရက်ရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ကျပ်ပန်းနာရောဂါ စသည်တို့ခံစားရခြင်း
အောက်ပါတို့သည် အသက်ရှုကျပ်ခြင်း နှင့် ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ သည် အဆုတ်ကိုထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်မည့် လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
· မောပန်းခြင်း (အသက်ရှုမ၀ခြင်း)
· အသက်ရှုလျှင် တရွှီရွှီမြည်ခြင်း
· ရင်ကျပ်ခြင်း (အဆုတ်တွင် ချွဲများပိတ်ခြင်းကြောင့်ရင်ကျပ်ခြင်း)
ကလေးငယ်များတွင် ကင်ဆာဆေးဒဏ်သည် တဖြေးဖြေးခံစားလာရသည်ရှိသကဲ့သို့ မခံစားရသည်များလည်းရှိသည်။ သို့သော် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုဆိုးလာတတ်ပါသည်။တခါတရံတွင် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့် အဆုတ်ကိုဆေးစစ်ခြင်းများလုပ်မှသာ အဆုတ်၏အခြေအနေကို သိနိုင်သည်။
အဆုတ်၏ အခြေအနေကို သိရှိရန် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်၇န်လိုပါသည်။
အောက်ပါတို့သည် အဆုတ်၏ အခြေအနေကို သိရှိရန် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပါသည်။
· လူနာ၏ ရာဇ၀င်ကိုမေးမြန်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကြိတ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားသော မူမမှန်သောပြောင်းလဲမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ထို့အပြင်လူနာ၏နဂိုရောဂါများနှင့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံများကို စစ်ဆေးခြင်း။
အင်္ဂါများနှင့်အရိုးများကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်မှန်ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိမမြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကိုတွေ့ရန် ရောင်ခြည်တခုထုတ်လွှတ်ကာ ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းဖြစ်သည်။
· အဆုတ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးခြင်း
၎င်းသည် အဆုတ်တွင် ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်နိုင်သော လေပမာဏ၊ အောက်ဆီဂျင်သုံးစွဲသည်ပမာဏ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ရှုထုတ်သည့်ပမာဏကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
· သင့်ကလေးတွင်ခံစားနေရသော ကျန်းမာရေးပြသနာများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပါ။ စစ်ဆေးမှုများကို အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် လိုအပ်သလိုထပ်ပြီး ပြုလုပ်ပါ။
ကျန်းမာစေသော စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံများရှိရန်လည်း ကင်ဆာဆေးဒဏ်ခံစားနေရသော ကလေးအရွယ်တွင်ခံစားရသော အဆုတ်ကင်ဆာများအတွက် အေ၇းကြီးပါသည်။
ကင်ဆာဆေးဒဏ်ခံစားနေရသော ကလေးများသည် ကျန်းမာရေးအတွက်
· ရာသီတုပ်ကွေး နှင့် နမိုးနီးယားရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများထိုးခြင်း တို့ပြုလုပ်သင့်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာဝေဒနာသည် ကလေးငယ်များ ပျင်းရိငြီးငွေ့မှုကို ဖြေရှင်းနည်း
အဆုတ်ကင်ဆာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ
သမားရိုးကျမဟုတ်သော အဆုတ်ကင်ဆာ ကုထုံးများ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စကျတငျဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောကျတိုဘာ 25, 2017
Late Effects of Treatment for Childhood Cancer. http://www.cancer.gov/types/childhood-cancers/late-effects-pdq#section/all. Accessed 28/07/2015.
ကင်ဆာဆေးများနှင့် ပက်သက်သည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ
အဆုတ်ကင်ဆာကို တိုက်ထုတ်ပေးမည့် ဗီတာမင်ဓါတ်များ
အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါသည်ကလေးငယ်တွေကို မိဘတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲ
ခွဲစိတ်ပြီး နာလန်ထူနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းများ
အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် မသေချာမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း